Maalif Maqaan tokko lama taha laata! – Welcome to bilisummaa
Maalif Maqaan tokko lama taha laata!
TBOJ jechuun Tokkummaa Barattoota Oromoo biyya Jermal nii dha, namni hin beeyne yoo jiraate hubbachiisuu barbaadeeti. Garuu dhiheenya kana TBOJii heddumaachuu isiiti dhagayaa jirra. Akka fakkeenyaati yooniin isiniif lakkaawe, TBOJ walabaa, TBOJ caayaa ABO itti fufa yoon dhaabu baadhe.
Osoo adunyaa mara irraa oromoon afaan tokko hasawaa jirtuu, teenya tun ta jermal afaan isii waliif wallaalle. Tokkomuun akka gaafa duraanitti afaan qofa osoo hin taane, dhugumatti oromoon alaa manaan tokkooma jirti, haatahu malee namootiin tokkummaan saba ballaa kanaa garaa gubaa jirtuus akka jiru irraanfachuu hin qabnu.
Gaafa guyyaa 12.04.2014 (Ebla 12, 2014) magalaa Frankfurt am Main jedhamtutti, Guyyaan Gootota Oromoo mana tokko (fooqii takka) keeysatti bakka lamatti kabajabee oolee jira. Kun waan bayyee nama gaddisuu fii nama qaanfachiisuu dha. Warreen ,,Dura Taa’oota’’ iffiin ja’u seenaan guyyaa kabajamaa kanaa yadachuuf teeysi. Gootootni Qabsoo Bilisummaa tanarratti kufan maal ja’an laata yoo waan akkanaa gubbaa gad-laalan?
Garuu maaliif lama tahan ja’ee yoo nama gaggaafadhuu, deebisaan ani arkadhu: gama TBOJ walabaa irraa, ABO ifiifuu afurii; tamiif Caayaa taanee tam dhiifna, ja’u. Gama kaniin ammoo isaan Caayaa ODF (ADO) tahuu barbaadu jechuun dhagaya. Maaliif akkana jettan ja’ee yooniin gaafadhu, dura Ta’oonni isaanii, barreessa saniitiin ala, hundinuu miseensoota ODF tahuu saniiti himu.
Ani wanni na gaddisiisu, jollee baqattootaatiif (miseensoota saanii harka guddaaf) maal yaadu garuu isaan? Jollee baqqatoota ta ifiifuu humaa hin qabne, ta boru waan isii eeggattu hin beeyne, farada (soba) hin jirre itti himuu dhisaanii maalif hin gargaarre? Jollee yaada biyyaattiin jaanjoyte daadarkeessuurra karaa maaliif hin garsiifne?
Namoonni tokko tokko rakkoo maallaqaati shakku. Isaan wanni irratti wal-daadarkeeysan bu’aa (benefit) isaan maalaqqa jollee fii biyya Jermal irraa walitti sassaabu ja’u. Biiyti Jermal (Deutschland) tun dhaabootti bolatikaa mallaqaan akka gargaaran namootiin hedduun ni himu. Gaafa Sabtii (Sambata Xiqaa) wanni walgahiin lama man-tokko (fooqii takka) keeysatti taateef sababuma kanaan tahuu hin ooltu.
Oromoon bakkayyuu kaatee, soodaa takka malee, yeroo qaaqtu (afaan baaftee dubbattu) amma! Ka’aa tokkummaaf lallaabaa, tokkummaa adunyaa irra figaa jirtuu tana labsaa! Nama tokkoomeetu afaan tokko dubbataa. Nama walii galeetu bilisooma.
Wanni nuti hundi irraanfachuu hin qabne, bilisummaa dhabuu keenyaatu, alaa mana nu dhoorkee kadhattuu nu godhe. Saniifuu rakkoo tana keeysa bahuu kan dandeenyuun yoo tokkoome qofa. Tokkommaa habaqaalamte tana tajaaliluun dirqama hinda kenyaati.
Yaada: mucaaxiqqaa@gmail.com, Deutschland
Previous MINILIKOOTA BARDHIBBEE 21-FFAA : Kutaa Shanaffaa
Next BAQATTOONNI SHORORKEESSITOOTAA MITI!